သရုပ်ဆောင် ပိုးအိအိခန့်ဟာဆိုရင် ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ သရုပ်ဆောင်ပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ သူလေးတစ်ယောက်ပါ။ ချစ်စရာမျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူမကတော့ ချစ်ရာကောင်းတဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးတွေနဲ့အတူ အမြဲလှပပြီး ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ သူလေးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူမကတော့ နိုင်ငံကျော် ဘောလုံးသမား အောင်သူရဲ့ ချစ်သူလေးဆိုတာ အားလုံးကအသိပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
ဘောလုံးသမား အောင်သူဟာဆိုရင် နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် ကစားသမားတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ အောင်သူကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘောလုံးအသင်းမှာ အငှါးကစားသမားအဖြစ် သွားရောက်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူနဲ့ ဝေးကွာနေပေမယ့်လည်း သူမက နားလည်သိတတ်ပေးတဲ့ သူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ခိုင်မြဲတဲ့အချစ်တွေနဲ့ ချစ်သူဘဝခရီးကို ပျော်ရွှင်စွာ လျှောက်လှမ်းနေနိုင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ချစ်သူကို လွမ်းပြီး သတိရတဲ့အကြောင်းလေးကို ” စိတ်ကောက်တာ??? တစ်ယောက်ထဲ ??? ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့ နှုတ်ခမ်းစူပြီး စိတ်ကောက်လိုက်တဲ့ video file လေးကိုပါ သူမရဲ့ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ ဖော်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းတစ်ဖက်နဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေများစွာကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ” အို အေ့ အေ့ အို ” ဇာတ်ကားမှာလည်း သရုပ်ဆောင် လူမင်း၊ ထူးခြား၊ နေဆန်း ၊ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် တို့နဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်ရိုက်ကူးထားခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စား အားပေးမှုကို လက်ခံရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ” အထက်တန်းစား ” ရုပ်ရှင်ကားကြီးကို သူမလေးစားအားကျရပြီး အကြိုက်ဆုံး မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ မင်သားနေတိုးနဲ့အတူ ရိုက်ကူးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မိုင်တွေခြားနေတဲ့ ချစ်သူကို နှုတ်ခမ်းစူပြီး စိတ်ကောက်ပြလိုက်တဲ့ ပိုးအိအိခန့်ရဲ့ video
ရေခြားမြေခြားမှာရောက်နေတဲ့ ချစ်သူကို နှုတ်ခမ်းလေးစူပြီး စိတ်ကောက်ပြလိုက်တဲ့ ပိုးအိအိခန့်ရဲ့ video လေးကတော့ မြင်သူတိုင်း ကြွေစေနိုင်လောက်တဲ့ အသည်းယားစရာ video file လေးဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်ကြီးက Shareပြီး မျှဝေပေးလိုက်ကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုအားပေးကြပါသော ချစ်ပရိသတ်များအပေါင်းကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။